देशको परिस्थिती सुल्झाउन सत्तापक्ष भन्दा कांग्रेस बढि चिन्तित र प्रयन्तशिल : उपसभापति पौडेल-Nagarikaawaj.com
देशको परिस्थिती सुल्झाउन सत्तापक्ष भन्दा कांग्रेस बढि चिन्तित र प्रयन्तशिल : उपसभापति पौडेल
‘याे सरकारले गरी खाने मेसो देखाएन,अाेलीले गल्ती माथि गल्ती गरे’
कपिल ज्ञवाली/ बुुटवल,पुस १६ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पोडेलले पार्टिलाइ नया गति दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले १३ औं महाधिबेशनमा आफ्नो जित पक्का रहेको दाबि गर्दै आफू सभापति भएपछि कांग्रेसमा गुट–उपगुटको राजनीति बन्द हुने बताए ।
-बुटवलमा बिहिबार अायाेजित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पाैडेल। तस्वीर: कपिल ज्ञवाली/नागरिक आवाज ।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले भने—‘म बाट नेता कार्यकर्ताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् मैले उहाहरुको आबश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्नेछु ।’
आफूले पार्टिमा राम्रो र अहम जिम्मेबारीका साथमा काम गरेको बताउदै अब पार्टिको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने बताए । आफूले ‘हेल्दी कम्पिटिसन’ गर्ने बताउदै देशका बिभिन्न भागमा पुगेपछि कार्यकर्ताले आफूलाइ नै सभापति बनाउन चाहेको पौडेलले उल्लेख गरे ।
नेपालको नया संबिधान दक्षिण एसियाकै समाबेशी भएको पौडेलले बताए । नेता पौडेलले देशको परिस्थिती सुल्झाउन सत्तापक्ष भन्दा कांग्रेस बढि चिन्तित र प्रयन्तशिल रहेको जिकिर समेत गरे ।
आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाइ सिमांकनलाइ बटम लाइन होइन सिमाकनलाइ बटममा राखेर सहमतिमा आउन पौडेलले आग्रह गरे । उनले सिंमाकनलाइ २—३ महिना होमवर्क गरेर टुंगाउन सकिने धारणा राखे । ‘जनताको भावना बुझेर मात्र सिमांकन टुगांउनुपर्छ त्यसकालागि कम्तिमा ३ महिना होमवर्क जरुरी छ’ पौडेलले भने ।
सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउदै पौडेलले भने—‘सरकारले गरि खाने मेसो देखाको छैन,संबिधान मिचर मन्त्री माथि मन्त्री केका लागि ? ’
‘६—६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री केपि ओलीले के गर्न खोजेका हुन् ? ’
जनतालाइ बोझ बोकाउने बेला यो नभएको पौडेलको भनाइ छ । संबिधानकमा भएको ब्यबस्था मिचेर २५ भन्दा बढि मन्त्री नबनाउने काम ओलीले गरेकोमा पौडेलले आपत्ती जनाए ।
अरु प्रधानमन्त्री भन्दा केपि ओलीले बढि नै गल्तीकाम गरेको पौडेलले आरोप लगाए ।
अहिलेनै सरकारको कमि कमजोरीको धज्जी उडाउदै हिड्ने बेला नभएको पौडेलको भनाइ थियो ।
कांग्रेसले अरुको धज्जी नउडाउने संयमता राखेको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलन युनियनका सभापति बिक्रम खड्काकाे अध्यक्षता तथा सचिब कबिन्द्र नेपालकाे संचालनमा भएकाे हाे ।